Tababaraha Chelsea Ee Antonio Conte Oo Barcelona Uga Digay Xiddiga Ugu Qatarsan Kooxdiisa – Kooxda.com
Home 2018 March Ingiriiska, Wararka Maanta Tababaraha Chelsea Ee Antonio Conte Oo Barcelona Uga Digay Xiddiga Ugu Qatarsan Kooxdiisa
Tababaraha Chelsea Ee Antonio Conte Oo Barcelona Uga Digay Xiddiga Ugu Qatarsan Kooxdiisa
Tababaraha Kooxda chelsea ee Antonio Conte ayaa kooxda Barcelona uga digay xiddiga ugu khatarsan kooxda chelsea ka hor kulankooda lugta 2-aad ee wareega 16-ka tartanka champions league kaas oo ka dhici doona garoonka kooxda Barcelona ee Camp Nou.
Tababaraha reer Italy ee Antonio Conte ayaa qirtay in Willian uu boos ka samaysatay qorshihiisa kulanka Barcelona kadib markii uu xiddiga reer Brazil qaab ciyaareedkiisa fiican sii waday goolna dhaliyay kulankii ay kooxda cheslea 2/1 uga badisay kooxda Crystal Palace.
Willian ayaa goolka 1-aad dhaliyay daqiiqadii 25-aad kulankii ka dhacay Stamford Bridge isaga oo dhaliyay goolkiisii 5-aad 5-tii kulan ee ugu dambaysay ee tartamada oo dhan.
Kulanakaas kadib Antonio Conte ayaa xaqiijiyay in uu sii wadi doono in uu Willain ku bilaabo shaxdiisa kadib qaab ciyaareedka xiddiga 29 jirka ah.
“Waad arki kartaa, hadii uu xiddig qaab ciyaareed fiican ku jiro aniga ayaa ah qofka ugu horeeya ee u dooranaya shaxda Rasmiga ah”ayuu yiri.
“Willian waxa uu u ciyaarayaa si fiican laakiin waxa aan doonayaa in aan shaaciyo in uuna kaliya si fiican u ciyaarayn marka uu kubada haysto laakiin sidoo kale marka uuna kubada haysan,waxa uu si adag ugu shaqaynayaa si uu u caawiyo kooxda marka ayna kubada haysan”.
“Waxa uu muujinayaa qaangaarnimo weyn wakhtigan noloshiisa ciyaareed, waxana aan aad u rajaynayaa in uu sii wado qaab ciyaareedka uu haatan u ciyaarayo”